VAIA4000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၄၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VAIA 4000
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAIA4000
4000LPH VAIA4000 Purified Water Filtration System is the No. 1 water purification product in Vietnam today.
400LPH VAIA400 ရေစစ်သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် နံပါတ် ၁ ဖြစ်ပါသည်။
Withaclosed water filtration process automatically using RO water filtration technology, the finished water is pure water that is beneficial to human health. If you are looking foraproduct that specializes in purified water? If you want to own an industrial water purifier to produce bottled water? If you are looking to replace old technology water purification products to meet the increasing demands of customers.? ... 4000LPH VAIA4000 Purified Water Filtration System will be the perfect choice for you.
RO စစ်ထုတ်စနစ်ကို အသုံးပြုထားတဲ့ အော်တိုရေစစ်လုပ်ငန်းဖြစ်တာကြောင့် စစ်ထုတ်ပြီးတဲ့ရေက ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ ရေသန့်အတွက် အထူးပြုလုပ်ဖို့ ရှာဖွေနေပါသလား။ အရင်က နည်းပညာကို အစားထိုးပြီး ဝယ်ယူသူအကြိုက်တွေ့စေမယ့်အရာကို ရှာနေပါသလား။ 4000LPH VAIA4000 ရေစစ်က သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Improved and updated with the latest water filtration and treatment technology in 2018, the purification and purified water production system using the autovan stainless steel filter column withacapacity of 4000 liters per hour has won the trust of the majority of customers. domestic and foreign goods because of the ability to quickly filter water, save water, the quality of pure water ensures food hygiene and safety standards. Let's join Viet An general trade joint stock company to learn more about 4000LPH VAIA4000 Purified Water Filtration System through the article below.
၂၀၁၈ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်မီတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် တစ်နာရီမှာ ၄၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသောာ စတိန်းလက်စ်စတီး ရေစစ်ကော်လံကို အသုံးပြုထားတဲ့ ဒီစက်က ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို အပြည့်အဝ ရရှိထားပါတယ်။ ရေကို လျင်မြန်စွာ စစ်ပေးနိုင်ခြင်း၊ ရေကို ချွေတာနိုင်ခြင်း၊ ရေသန့်ရဲ့ ကွာလတီက အစားအသောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေး စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ ညီခြင်းတို့ကြောင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဝယ်ယူသူတွေက ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ 400LPH VAIA400 ရေစစ်အကြောင်းကို ပိုမိုစုံလင်စွာ သိရှိဖို့ အောက်က ဆောင်းပါးတွင် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Why is the 4000LPH VAIA4000 Purified Water Filtration System chosen by many people?
4000LPH VAIA4000 ရေစစ်ကို ဘာကြောင့် လူအများ ရွေးချယ်ကြတာလဲ
• Isaproduct specially designed to filter and treat industrial pure water from many different water sources.
• ရေအရင်းအမြစ် မျိုးစုံကို စက်ရုံသုံးရေသန့်အဖြစ် ပြုပြင်စစ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်။
• The process of purifying water, treating pure water is completely automatic, closed without interference from outside factors, without human involvement, so the water quality is 100% pure. food safety and hygiene
• ရေကို စစ်ထုတ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်က လူရဲ့လုပ်ဆောင်မှုမပါဘဲ အပြည့်အဝ အော်တိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၁၀၀% သန့်စင်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချရပါတယ်။• Compact industrial design, withashiny 304 stainless steel filter column that is both aesthetically pleasing and easy to clean.
• 304 စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် လှပပြီး သန့်ရှင်းရလွယ်ကူသလို ဒီဇိုင်းကလည်း သိပ်သည်းပါတယ်။
• The system of filter columns, valves, pumping systems, and filters withalarge capacity, can filter up to 4000 liters of pure water / hour, so it ensures continuous supply of pure water for all needs. Use
• ရေစစ်ကော်လံတွေ၊ ရေစုပ်တင်ခြင်း စနစ်တွေက တစ်နာရီမှာ ၄၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် ရေတွေအများကြီးကို အဆက်မပြတ် ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
• The process of sterilizing, filtering bacteria2times, always keep pure water to ensure sterility after filtration and when stored inastorage tank waiting for use.
• ပိုးသတ်ခြင်း၊ ဘက်တီးရီးယားတွေကို နှစ်ကြိမ်စစ်ထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်က စစ်ထုတ်ပြီး အသုံးပြုဖို့ သိုလှောင်တဲ့ တိုင်ကီထဲ ထည့်ထားတဲ့အခါ ရေသန့်က ပိုးသတ်ပြီးတာ သေချာစေပါတယ်။
• The automatic valve system has an LCD screen that fully displays the filter parameters and they are capable of self-adjusting the filter column to protect the filter, filter elements, stabilize the position of the output water.
• အော်တိုအဆို့စနစ်မှာ စစ်ထုတ်ပါရာမီတာတွေကို ပြတဲ့ LCD စခရင် ရှိပါတယ်။ သူတို့က ရေစစ်၊ ရေစစ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို ကာကွယ်ဖို့နဲ့ အပြင်ကရေရဲ့ နေရာကို တည်မြဲစေဖို့ ရေစစ်ကော်လံကို ကိုယ်တိုင် ညှိနိုင်ပါတယ်။
Purified water and its benefits
ရေသန့်နှင့် ၄င်း၏ ကောင်းကျိုးများ
Nowadays it seems that purified water has become familiar to people, it is used in offices, schools, hospitals, restaurants, hotels, shopping malls ... and even inside. modern families. Because of the great benefits that purified water can bring to humans such as:
ယနေ့ခေတ်မှာ ရေသန့်က လူတွေနဲ့ အရမ်းရင်းနှီးလာပြီး ရုံးတွေ၊ ကျောင်းတွေ၊ ဆေးရုံတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ ဟိုတယ်တွေ၊ ရှော့ပင်းမောလ်တွေ၊ မိသားစုထဲမှာပါ နေရာတိုင်း သုံးလာကြပါတယ်။ ဒါက ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ရေသန့်က အောက်ပါကောင်းကျိုးတွေ ယူဆောင်ပေးလို့ပါ။
Protect people from lead toxins: Lead is one of the phobias for human health, is the factor that can lead to cancer. Lead mixed in water and if only using water with normal boiling and then using it will not remove lead from the water. But when using purified water filtered through 4000LPH VAIA4000 Purified Water Filtration System, it is different, with more than 10 standard filtration stages combined witharo filter withamicro-filter of 0.0001 micronmeters so lead will be removed. completely out of the water. You have eliminated 1 of your health concerns when using purified water every day.
လူတွေကို ခဲအဆိပ်အတောက်မှ ကာကွယ်ပေးခြင်း-ခဲက ကျန်းမာရေးအတွက် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်ဆာတောင် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ခဲတွေပါနေတဲ့ ရေကို ကျိုချက်သောက်ရုံနဲ့ ခဲတွေကို မဖယ်ရှားနိုင်ပါဘူး။ သို့သော်လည်း 4000LPH VAIA4000 ရေစစ်ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ၀.၀၀၀၁ မိုက်ခရိုမီတာ အရွယ်အစားရှိတဲ့ RO ရေစစ်ပါဝင်တဲ့ စံချိန်မီတဲ့ အဆင့် ၁၀ ဆင့်က ခဲကို လုံးဝ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ ရေသန့်ကို နေ့စဉ်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ပက်သတ်ပြီး စိုးရိမ်နေရတဲ့ အရာတစ်ခုကို ဖယ်ထုတ်နိုင်ပါပြီ။
Replenishing water for the body: more than 70% of our body composition is water so that each person, every day needs to replenish the body from 2-2.5 liters of water. Depending on the age, on the level of movement of each person, however, it is necessary to add full water to the body to ensure all activities inside the body are guaranteed.
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ရေဓာတ်ပြန်ဖြည့်ပေးခြင်း- လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ရေက ၇၀% ပါဝင်တာကြောင့် နေ့စဉ် ၂-၂.၅ လီတာ ရေပြန်ဖြည့်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အသက်အရွယ်အလိုက် လှုပ်ရှားသွားလာမှုအလိုက် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ရေကို ပြန်ဖြည့်ပေးရပါမယ်။
Help the body awake: When you feel the bee head, it is most likely because the body is inastate of dehydration. Drinking water will help stop the headache. Plus, it can help make you more discerning. Research shows that moderate dehydration can significantly impair and affect cognitive function. In children, because they do not know their bodies need water, they easily affect their school performance.
ခန္ဓာကိုယ်ကို တက်ကြွစေပါတယ်- တကယ်လို့ သင်ခေါင်းကိုက်နေမယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်က ရေဓာတ်လိုအပ်နေတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ရေသောက်လိုက်ရင် ခေါင်းကိုက်တာ ပျောက်သွားမှာပါ။ ဒါ့အပြင် ဦးနှောက်အတွက်လည်း ကောင်းပါတယ်။ စာတမ်းတွေအရ ရေဓာတ်အလုံအလောက်မရှိခြင်းက ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကလေးတွေဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ရေဓာတ်ကို မသိတာကြောင့် ကျောင်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လွယ်ကူစွာ ထိခိုက်ပါတယ်။
Aids in digestion: Everyone knows that they have to load Full fiber if they wantahealthy digestive system, without constipation, but only fiber without water, everything will be just desirable.
အစာခြေခြင်းမှာ ကူညီပေးတယ်-အစားအသာတွေများစွာစားပြီး ဝမ်းချုပ်စေပါတယ်။ ရေက အစာခြေခြင်းအတွက် ကောင်းမွန်ပါတယ်။
Joint and muscle lubrication: Water makes up the bulk of the fluids, lubricants, and pads in joints and muscles. Drinking water before, during and after exercise will help reduce cramps and quickly fatigue.
အရိုးအဆစ်နဲ့ ကြွက်သားကို သန်မာစေခြင်း-ရေက အရိုးအဆစ်တွေ၊ ကြွက်သားတွေမှာရှိတဲ့ အရည်တွေ၊ ချောဆီတွေကို ပြုလုပ်ပါတယ်။ ရေကို လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ခင်၊ လုပ်နေစဉ်၊ လုပ်ပြီး သောက်ပါက ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကို အမြန်ဆုံး ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
Reducing calories: Water is really effective for weight loss because water does not contain calories but occupies an area. Instead of drinking cans of soda or juice, holding 1 glass of purified water, you will reduce 200 calories in your daily diet. At the same time it also helps you cut down to 10 tablespoons of sugar.
ကယ်လိုရီတွေ လျှော့ချပေးခြင်း- ရေမှာ ကယ်လိုရီမပါဝင်တာကြောင့် ရေသောက်လျှင် ဝိတ်ကျနိုင်ပါတယ်။ အချိုရည်တွေ သောက်မယ့်အစား ရေသန့် တစ်ဖန်ခွက်ကို သောက်သုံးခြင်းက နေ့စဉ် ၂၀၀ ကယ်လိုရီကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သကြား ၁၀ ဇွန်းစာလည်း လျှော့ချပေးပါတယ်။
There are also many benefits that purified water can bring to humans. That's why we recommend that you drink up toastandard purified water every day.
ရေသန့်က လူသားတွေအတွက် အလွန်အရေးပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က နေ့စဉ် စံချိန်မီတဲ့ ရေသန့်ကို သောက်သုံးဖို့ အကြုံပြုနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
How much capital is needed to install 4000LPH VAIA4000 Purified Water Filtration System of Viet An
4000LPH VAIA4000 ရေစစ်ကို တပ်ဆင်ဖို့ အရင်းငွေ ဘယ်လောက် လိုအပ်သလဲ
To immediately own 4000LPH VAIA4000 Purified Water Filtration System of Viet An, you need to spend about 300 million.
4000LPH VAIA4000 ရေစစ်ကို တပ်ဆင်ဖို့ အရင်းငွေ သန်း ၃၀၀ လိုအပ်ပါတယ်။
In addition, to complete the production process, you should invest in buying an automatic bottle filling machine system with prices ranging around 500 million VND, an automatic bottle shrinking machine is used to shrink bottle nozzles, bottle neck. , bottle cap and bottle coal, there are many different temperature modes to adjust to suit the needs of users. Machines are produced at Viet An factory or imported from countries such as Italy, Germany, England ... according to your order.
ပိုပြီး ပြည့်စုံတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ဖို့ ဗီယက်နမ်ငွေ သန်း ၅၀၀ ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ စက်ကိုလည်း ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။ ဘူးနှုတ်ခမ်း၊ လည်ပင်း၊ အဖုံး စတာတွေကို လိုချင်တဲ့ အပူချိန်အတိုင်း ရှုံ့ပေးနိုင်တဲ့ အော်တို ဘူးရှုံ့စက်လည်း လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ စက်တွေကို Viet An စက်ရုံမှာလည်း ထုတ်လုပ်သလို သင့်ရဲ့ အော်ဒါအတိုင်း အီတလီ၊ ဂျာမနီ၊ အင်္ဂလန် စတဲ့ နိုင်ငံများမှလည်း တင်သွင်းပါတယ်။
All these products are supplied by Viet An and are committed to the quality with the most reasonable price.
ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးကို Viet An မှ ပေးပို့ပြီး အရည်အသွေးပြည့်မီကာ ဈေးသင့်ကြောင်း ကတိပေးပါတယ်။
2 Air disinfection lamp လေပိုးသတ်မီးအိမ်6unit VA/ USApec
3 Air disinfection lamp hanger လေပိုးသတ်မီးအိမ်ရုံ6unit VA/ USApec
14 40” PP Filter Cartridge ၄၀7unit VA/ USApec
17 Membrane housing အလွှာပါးအိမ် 1 unit VA/ USApec
18 RO membrane ROအလွှာပါး2unit Hitech-USA/CSM Korea
25 UV lamp UV မီးအိမ်2unit Poland/ Hungary/ USA
26 Ozone machine အိုဇုမ်းစက်2unit VA/ USApec
27 Industrial filter housing စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ် 1 unit VA/ USApec
28 Bacterial filter Cartridge ဘက်တီးရီးယားစစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်5unit VA/ USApec
Hỏi đáp & đánh giá 4000LPH VAIA4000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်